75% Nylon 25% spandex peach skin interlock jira remitambo leggings
Tsanangudzo Iri jira renaironi spandex rakavharika, nhamba yedu yechinyorwa HS2105, yakarukwa ne75% naironi uye 25% spandex. Yedu peach skin interlock knit jira rine mativi maviri akabhurwa. Iko kubhurasha kunopa jira rakapfava suede-kufanana nekunzwa uye yakavanzika ribbed chitarisiko. Ukachicheka hachipedzi uye chiri nyore kusonesa nacho. Iine 25% spandex yemukati, jira iri rine rakatambanudzwa zvakanakisa, rakakwana pakupfeka yoga, sport legging...
82% Polyamide 18% elastane interlock yakarukwa 4 nzira yakatambanudza jira reLeggings
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iyi polyamide elastane interlock jira, chinyorwa chedu nhamba HS2104, yakarukwa ne82% naironi uye 18% spandex. Yedu nylon spandex interlock knit jira rine ruoko rwakatsetseka pamativi ese. Ukachicheka hachipedzi uye chiri nyore kusonesa nacho. Iro jira repakati nepakati rinopindirana rine kudzvanywa kwakanaka. Iyi interlock knit jira jira rakarukwa kaviri. Yakakora kudarika jira rejezi rimwechete, rinop...
100% Polyester RPET yakadzokorodza hunyoro wicking jacquard mesh jira rehembe dzemitambo
Tsanangudzo Iyi polyester micro mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS667, yakarukwa ne100% polyester. RPET jira kana recycled polyethylene terephthalate imhando itsva yezvekushandisa zvakare uye yakagadzikana zvinhu zviri kubuda. Kushandisa jira iri kunogona kuderedza zvinhu zvepurasitiki, kunyanya mabhodhoro emvura, kubva kumakungwa edu nemarara. Iri jira rakadzokororwa rinofema uye rakasununguka, rinoita kuti rive jira rakakodzera kwazvo ...
Wholesale 89.5% polyester 10.5% spandex jacquard yakarukwa machira emitambo
Tsanangudzo Iyi jacquard yakarukwa mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS245, yakarukwa ne89.5% polyester 10.5% Spandex. Iyi polyester spandex micro mesh jira inofema, elastic uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo remitambo, kushingaira kupfeka, sport jersey, sport top and casual wear etc. Tinogona kugadzira jira rakasiyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi zvakaipa,...
Kutengeswa kunopisa 100% polyester mesh jacquard rakarukwa jira rehembe dzemitambo
Description Yechigadzirwa: Iri jacquard mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS790, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira inoratidzira shiri yeziso patani, inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo rezvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jersey remitambo, mutambo wepamusoro uye wakajairika kupfeka etc. Tinogona kugadzira basa rakasiyana rejira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi zvakadaro sezvo hunyoro wickin ...
Wholesale 100% polyester jacquard hexagonal mesh yakarukwa machira emitambo
Description Yechigadzirwa: Iri jacquard mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS310, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa jira inoratidzira hexagonal pateni, inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo remitambo, kushingaira kupfeka, jersey remitambo, sport top uye casual kupfeka etc. Tinogona kugadzira basa rakasiyana rejira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kunge mwando w...
Premium 100% polyester jacquard mesh inoshanda jira remitambo yezvipfeko zvemitambo
Chigadzirwa Tsananguro: Iri jacquard rakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS101, yakarukwa ne100% polyester. Iyi jacquard inofema uye yakagadzikana, iyo inoita kuti ive jira rakakodzera kwazvo remitambo, kushingaira kupfeka, yoga kupfeka, sport top, tank top uye casual kupfeka etc. -yakaoma uye inorwisa mabhakitiriya. Kuti ndione...
Heavy huremu polyester spandex gobvu pique yakatambanudza jira repolo shati
Tsanangudzo Yechigadzirwa: Iyi pique yakarukwa jira, chinyorwa chedu nhamba HS191, yakarukwa ne91.5% polyester uye 8.5% spandex. Iyi heave huremu pique polo jira imhando yejira rakarukwa kaviri. Iyo pique jira ine ribbed-yakafanana mameseji ayo anogona kuumba akasiyana-siyana madhaimani-kunge kurukwa. Rutivi rwayo rwekumashure rwakati sandara. Iri jira rakarukwa rinopa mhepo ine mhepo uye yekuwedzera mhepo kana ichishandiswa polo shirts. Kufananidza neje...
100% polyester micro mesh jacquard yakarukwa machira emitambo
Chigadzirwa Tsananguro: Iri jacquard mesh jira, chinyorwa chedu nhamba HS010, yakarukwa ne100% polyester. Iyo polyester jacquard yakarukwa mesh jira ine pini dot pateni. Inofema uye yakasununguka uye yakanakira zvipfeko zvemitambo, kushingaira kupfeka, jezi remitambo, sport top uye casual wear etc. Tinogona kugadzira zvakasiyana-siyana zvejira maererano nezvinodiwa nemutengi zvakadai sekunyorova, kukurumidza kuoma uye ...
Wholesale polyester interlock 1 * 1 mbabvu yakarukwa jira remitsipa
Chigadzirwa Tsananguro: Iri jira rembabvu repolyester, nhamba yedu yechinyorwa HS497, yakarukwa ne100% polyester. Ribbing jira, zvakare dzimwe nguva rinozivikanwa se tubular knit, jira rakarukwa, rakatambanudzwa iro rinokutendera kuti uunganidze zvinhu zvakaita semawoko mucuff, kana kuti anogona kupedzisa mitsipa uye armholes pahembe. Iyo zvakare dzimwe nguva inoshandiswa kugadzira matop, miniskirts uye madhirezi. Tinogona kugadzira akasiyana mabasa ejira accor...
Ndeipi jira rakanakira zvipfeko zvemitambo?
1, Cotton Munhoroondo, chibvumirano chakajairika pakati penyanzvi dzeassiduity chaive chekuti donje chinhu chisingatore ziya, saka zvanga zvisiri…
Nzira yekusarudza nzira ina yekutambanudza shapewear ...
Munguva dzazvino, vanhu vari kuwedzera vanosarudza kuchengetedza chimiro chakaonda nekupfeka zvipfeko. Zvakaitwa anatomized kuti yepasirese shapewear chikumbiro ndeye ...